Nepali Christian Bible Study Resources - सबै कुरा जाँच्ने मनस्थिति
» अध्ययन मालाहरू » एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम » सबै कुरा जाँच्ने मनस्थिति
म प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछु कि मलाई ख्रीष्टमा डोर्‍याउने व्यक्तिले यो कुरा मलाई सिकाउनुभयो जसको फलस्वरूप मैले आफ्‍नो विश्वासी जीवन सबै कुरा जाँच्ने दृष्टिकोणका साथ प्रारम्भ गर्न सकेँ। यसले मलाई अनेकौं आत्मिक जोखिमहरूदेखि जोगाएको छ। हामी दक्षिण फ्लोरिडादेखि मेक्सिकोसम्म यात्रा गर्ने क्रममा खाडीको किनारनेर कुनै एक ठाउँमा एउटा इसाई पुस्तक पसलमा छिरेका थियौं। त्यो ठाउँ मोबाइल, आलबामा थियो जस्तो लाग्छ। उनले मलाई एउटा किङ्ग जेम्स बाइबल किनिदिनुभयो अनि त्यसपछि उहाँले त्यहाँ बिक्रीमा राखिएका सबै पुस्तकहरूलाई देखाउँदै भन्नुभयो, "तिमी एकदम होशियार हुनुपर्छ र सबै कुरालाई परमेश्वरको वचनले जाँच्नुपर्छ। मान्छेमाथि भरोसा राख्‍न सकिन्न; "ठूला-ठूला नामहरू" माथि भरोसा राख्‍न सकिन्न। धेरै झूटा शिक्षकहरू हुनेछन् भनेर बाइबलले चेतावनी दिएको छ।" यही बुद्धिमानी सल्लाहका साथ मैले आफ्‍नो ख्रीष्टिय जीवन प्रारम्भ गरेँ।
यस प्रकारले जाँच्ने मनस्थितिलाई आज इसाई भन्नेहरूको बीच तिरस्कार गरिन्छ, "इभान्जेलिकलहरू" का बीच समेत। म पहिलो पटक पत्रकारको अधिकार सहित एउटा एक्यूमेनिकल (एकतावादी) सम्मेलनमा उपस्थित हुँदाको कुरा म सम्झना गर्दछु। त्योचाहिँ सन् १९८७ मा न्यू ओर्लियन्समा थियो अनि त्यहाँ ४० ओटा बेग्ला-बेग्लै सम्प्रदायहरूबाट दसौं हजार मानिसहरू उपस्थित थिए। त्यसमा रोमन क्याथोलिकहरूको ठूलै सहभागिता रहेको थियो। हरेक विहान रोमन क्याथोलिकहरूको मास (mass) हुन्थ्यो। एक दिन म एकजना एपिस्कोपेली (Episcopalian) साधारण अगुवासित कुरा गर्दै थिएँ र उसले आफ्‍नो मुक्तिको गवाही बाँडे जुनचाहिँ शास्त्र-सम्मत नै सुनिन्थ्यो। तब मैले यस्तै एउटा प्रश्न गरेँ, "यदि तपाईं बाइबल विश्वास गर्नुहुन्छ र प्रभुलाई चिन्नुहुन्छ भने तपाईं कसरी यो धर्मभ्रष्ट खिचडीको बीचमा आरामसँग बस्न सक्नुहुन्छ?" उनले जवाफ दिए, "तपाईं अलिक खुकुलो हुनुपर्छ; भ्रममा परिएला कि भनेर तपाईं बढ्तै डर मान्नुहुन्छ।"
झूटा शिक्षकहरूको फल उनीहरूका कामहरू होइनन्; पद २२-२३ मा येशूले बताउनुभयो झूटा शिक्षकहरूले "धेरै अचम्मका कामहरू" गर्नेछन्।
झूटा शिक्षकलाई पक्का गरी चिनाउने फल उसको झूटा शिक्षा हो (प्रेरित २०:३०; रोमी १६:१७; गलाती १:६-७; १ तिमोथी १:३; २ पत्रुस २:१; १ यूहन्ना ४:१-२)। मदर टेरेसालाई विचार गर्नुहोस्। तिनले संसारको सबभन्दा गरीब ठाउँहरूमा गरीब र रोगीका लागि सेवाको थुप्रै असल कामहरू गरिन्, तर तिनले ख्रीष्टलाई चिन्दिनथिन् र तिनले एक झूटा सुसमाचारमाथि भरोस गर्थिन् र तिनले झूटा शिक्षाहरू सिकाइन्। सन् २००७ मा प्रकाशित मदर टेरेसा: कम बी माइ लाइट (Mother Teresa: Come Be My Light) नामक पुस्तकमा यी क्याथोलिक भिक्षुणीले आफ्‍ना क्याथोलिक कन्फेसरहरू (cofessors) र अगुवाहरूलाई ६६ वर्षभन्दा पहिलादेखि व्यक्त गरेका स्वीकारोक्तिहरू अभिलेख गरिएका छन्। उनले आफ्‍नो आत्मिक अवस्थालाई "मेरो अन्धकार" र येशूलाई "अनुपस्थित जन" ("Absent One") भनेर तारन्तार उल्लेख गर्छिन्। सन् १९५३ को मार्चमा उनले लेखिन्, "…मभित्र यस्तो भयङ्कर अन्धकारले बास गरेको छ, मानौं सर्वस्व नै मरेको छ। मैले यो 'काम' लगभग शुरु गरेदेखि नै यस्तो अवस्था रहँदै आएको छ।" एकजना कन्फेसरको सल्लाहबमोजिम उनले येशूलाई यसरी लेखिन्: "म बोलाउँछु, म पक्रन्छु, म चाह गर्छु -- अनि जवाफ दिने त्यहाँ कोही छैन -- साहारा कोही छैन -- अहँ, कोही छैन। एकलो…मेरो विश्वास कहाँ छ -- भित्री गहिराइमा समेत त्यहाँ केही छैन, तर रित्तोपना र अन्धकार। …जब म आफ्‍ना विचारहरूलाई स्वर्गतर्फ उचाल्न खोज्छु -- तब कायल पार्ने यस्तो रित्तोपना हुन्छ कि तिनै विचारहरू धारिला चक्कूझैं फर्कन्छन् र मेरो प्राणलाई छियाछिया पार्छन्। -- परमेश्वर मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनी मलाई बताइएको छ -- तरैपनि अन्धकार र चिसोपना र रित्तोपनाको वास्तविकता यति भयङ्कर छ कि मेरो प्राणलाई कुनै कुराले छुँदैन।" सन् १९६२ मा उनले लेखिन्, "यदि म कुनै हालतले सन्त बनेँ भने -- निश्चय नै म 'अन्धकार' को सन्त हुनेछु।" सन् १९८४ मा हामीले मदर टेरेसाको संस्था मिसनरीज् अफ च्यारीटीका सिस्टर आनसित अन्तर्वार्ता लिएका थियौं। आनचाहिँ नेपालमा वृद्धाहरूका बीच काम गर्दैथिइन्; मर्न लागेका हिन्दूहरूलाई ख्रीष्टमा ल्याउन खोज्ने उनीहरूको उद्देश्य नरहेको बरु उनीहरूकै देव‍देवीहरूलाई पुकार्नलाई आफूहरूले निर्देशन दिने गरेको कुरा उनले हामीलाई बताइन्।
अन्तिम दिनहरूको भ्रम यति प्रभावकारी हुनेछ, "यहाँसम्म कि सम्भव भए ता तिनीहरूले चुनिएकाहरूलाई पनि बहकाउनेछन्।" यो त भयङ्कर खाले भ्रम हो। त्यसैले हामीले एकदम यत्न गर्नुपर्छ र हामी एकदम होशियार हुनुपर्छ!
झूटा शिक्षकहरूले "चिन्ह र चमत्कारहरू" द्वारा धोका दिन्छन् भनेर येशूले चेताउनी दिनुभयो। यस सन्दर्भमा हामीलाई पेन्टेकोस्टल-क्यारिज्म्याटिक लहरको सम्झना आउँछ जसमा आश्चर्यकर्महरूलाई ठूलो जोड दिइन्छ। येशूको चेताउनीलाई विचार गरेपछि हामी जान्दछौं कि कुनै प्रचारकको सेवकाइको साथसाथमा कथित आश्चर्यकर्महरू हुन्छन् भन्दैमा त्यो परमेश्वरबाटको हो भन्ने हुँदैन। हरेक सेवकाइलाई बाइबलले नै जाँच्नुपर्छ, केवल बाइबलले मात्र।
येशूले झूटा ख्रीष्टहरूको बारेमा चेताउनी दिनुभयो र आज संसारमा त्यस्ताहरूको बिगबिगी छ। रोमन क्याथोलिक चर्चले रोटीको एउटा चोख्याइएको टुक्रालाई र सामर्थी मरियमको काखमा बस्ने एक दुर्बल मान्छेलाई 'ख्रीष्ट' मानेको छ। यहोवाका साक्षीहरू र यूनिटेरियनहरूले ईश्वरत्वबिहीन ख्रीष्टलाई 'ख्रीष्ट' भन्छन्। मोर्मनहरूले मानेका 'ख्रीष्ट' शैतानका दाजु हुन्। नयाँ युगी (New Ager) हरूले मानेका 'ख्रीष्ट' ले भारतमा आएर रहस्यवादी ज्ञान हासिल गरे। डा भिन्ची कोड (Da Vinci Code) का 'ख्रीष्ट' एक विवाहित व्यक्ति थिए। लिबरेशन थिअलोजी (Liberation Theology) का 'ख्रीष्ट' क्रान्तिकारी लडाकु हुन्। जीजस सेमिनार (‍Jesus Seminar) थरीका 'ख्रीष्ट' आफू के गर्दैछु सो नजानेका एक सम्भ्रमित मानिस थिए। ख्रीष्टियन रक सङ्गीत (Christian Rock Music) का पक्षधरका 'ख्रीष्ट' चाहिँ रमझम गर्ने ठाँटिला व्यक्ति हुन्। इमर्जिङ्ग चर्चका 'ख्रीष्ट' एक पर्यावरणवादी (environmentalist) हुन्। इस्लामका 'ख्रीष्ट' क्रूसमा मरेनन्।
सत्य जान्ने र पाप तथा भ्रमबाट बच्ने एउटै मात्र उपाय भनेको येशूको वचनमा लागिरहनु हो। स्मरण होस्, उहाँले "वचनहरू" (बहुवचन) भन्नुभएन तर "वचन" (एकवचन) भन्नुभयो। यसले पवित्र शास्त्र अर्थात् बाइबललाई जनाउँछ। परमेश्वरको वचन ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा लेखियो, क्याननीकरण (अध्याय १९ - बाइबल, भाग २ हेर्नुहोस्), गरियो अनि बाइबलमा हाम्रो लागि संरक्षण गरियो। तसर्थ, यदि हामी सत्य जान्न चाहन्छौं भने हामीले यसैलाई पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ र सबै कुरालाई यसैद्वारा जाँच्नुपर्छ।
सबै कुराहरूलाई पवित्र शास्त्रहरूद्वारा जाँच्नेहरू भएकाले बेरियाका यहूदीहरूको प्रशंसा गरिएको छ। आधुनिक इसाई जगतमा यो लोकप्रिय ठानिदैन तर परमेश्वरको वचनमा भने यसलाई "उत्तम" मानिएको छ।
हामीलाई सबै कुरा जाँच्न जोडदार अर्ती दिइएको छ। यो त ज्यादै फराकिलो जिम्मेवारी हो। हामीले आफ्‍नो जीवनमा सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको पवित्र वचनले जाँच्नुपर्छ, केवल इसाई शिक्षा र "माण्डलिक" कुराहरूलाई मात्र होइन, तर पेशा, सङ्गत, फेशन, मनोरञ्जन, विवाह, छोराछोरी हुर्काउने तरिका, सङ्गीत र अन्य सबै कुराहरू।
शैतानले शिक्षालाई जटिल बनाउने काम गर्छ ("सीधापनबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि", २ कोरिन्थी ११:३)। यसका उदाहरणहरू हुन् ईश्वरशास्त्रीय आधुनिकवाद (theological modernism), क्याल्भिनवादी रिफर्म्ड ईश्वरशास्त्र (Calvinistic Reformed theology), र इमर्जिङ्ग चर्चका शिक्षा। परमेश्वरको वचनको सत्यता अत्यन्तै गहिरो छ, तर यसमा यस्तो सरलता पनि छ कि सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले यो बुझ्न सक्छन् (लूका १०:२१)।
प्रेरितहरूको शिक्षा नै सत्यताको मानदण्ड हो भनेर हामीले पद ४ मा देख्छौं ("हामीले प्रचार नगरेको")। हामीसित प्रेरितहरूको शिक्षा नयाँ नियमका शास्त्रहरूमा छ। यो नै "पवित्र जनहरूलाई एकैचोटी सदाका निम्ति सुम्पिएको विश्वास" हो (यहूदा ३) जसद्वारा हामीले शिक्षा र अभ्यासलाई नापजोख गर्नपर्छ।
शिक्षागत विषयमा फराकिलो दृष्टिकोण (broad-mindedness)अपनाउनु शारीरिकपनको प्रमाण हो, आत्मिकपनको होइन। कोरिन्थीहरू शारीरिक भएकाले (१ कोरिन्थी ३:१-२), तिमीहरूले झूटा शिक्षकहरूलाई "राम्ररी सहन सक्नेथ्यौ" (पद ४) भनेर पावलले उनीहरूलाई भने। यसको मतलब उनीहरू झूटा शिक्षालाई पछ्याउने थिए नै भन्ने त होइन तर उनीहरू त्यसलाई ठाउँ दिनेथिए; उनीहरू त्यसलाई ठीकसँग सामना नगर्नेवाला थिए। "दुवै पाटालाई देख्‍न सक्नु" आत्मिकताको लक्षण होइन। सत्यतको एउटै मात्र पाटा हुन्छ! सत्यको बाटो साँघुरो हुन्छ (मत्ती ७:१४)।
झूटा शिक्षकहरू अरूलाई "शिकार बनाउन" अर्थात् लुट्न चाहन्छन्। झूटा शिक्षकहरू विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको वचनमाथिको उनीहरूको पूर्ण निश्चयता र ख्रीष्टको अनुग्रमाथिको पूर्ण निश्चयतालाई लुट्न चाहन्छन् र त्यसको सट्टामा मानवीय परम्परा र तत्त्वज्ञान प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छन्।
उक्त मण्डलीले यस कुरामा बलियो अडान लिएको कुरालाई ख्याल राख्‍नुहोस्। तिनीहरूले झूटा शिक्षकहरूलाई "झूट" भन्ने संज्ञा दिए र उनीहरूका कामहरूलाई घृणा गरे।
हितोपदेशको पुस्तकले बुद्धिमान र मूर्खको तुलना गर्दछ। यस पदमा मूर्ख व्यक्ति त्यसलाई भनिएको छ जो सजिलै विश्वास गर्छ र जसलाई सजिलै बहकाइन्छ र जसले सबै कुरालाई परमेश्वरको वचनद्वारा होशियारपूर्वक जाँच गर्दैन। "बोधा" को माने सजिलोसँग ठग्न सकिने भनेको हो। "बोधा" ले ख्रीष्टिय किताबहरू पढ्छ, प्रवचनहरू सुन्छ र समारोहहरूमा भाग लिन्छ र जाँचै नगरीकन सबै कुरा निल्छ।
अन्य भाषा के हो, के होइन? #१ »